Madaxweyne Xasan Sheekh: “dhibaatada dowladda heysata waa Mooshinad Baarlamaanku ka keeno Madaxda”. | POHSOMEV.COM
Madaxweyne Xasan Sheekh: “dhibaatada dowladda heysata waa Mooshinad Baarlamaanku ka keeno Madaxda”.
Muqdisho (Sh M Network)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Max’ud ayaa sheegay in fashilka ugu weyn ee heysta dowladda Soomaaliya uu yahay Mooshinada Xildhibaanadu ka keenaan Madaxda dowladda Soomaaliya.
Xasan Sheekh ayaa ku taliyay in ay wanaagsan tahay in Mooshin badalkiisa xilliyada wax laga tabanayo Madaxda la siiyo talooyin ku haboon oo ku duwa marinka toosasan sida uu hadalka u dhigay.
“ Ma haboona in la cabsi geliyo Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya oo laga keeno Mooshinno ka dhan ah xilalka ay hayaan” ayuu yiri Madaxweynaha.
Ugu dambeyn ayuu Madaxweynuhu sheegay in Baarlamaanka Soomaaliyeed in uu xaq u leeyahay in uu la xisaabtamo Xukuumadda Maadaama ay tahay hay’adda Fulinta dowladda isagoo ballan qaaday isna in uu ka taageerayo arrintaasi.